အနိုင်ယူလိုသူကို အရှုံးပေးလို့ တကယ် နှလုံးအေးရဲ့လား...??? ~ ဒီမိုဝေယံ
အနိုင်ယူလိုသူကို အရှုံးပေးလို့ တကယ် နှလုံးအေးရဲ့လား...???
ယနေ့အချိန်အခါတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရဟု အမည်ခံထားသည့် အာဏာသိမ်း နအဖသည် အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို တည်ဆောက်နိူင်ရန် မူဝါဒလမ်းစဉ်(၇)ရပ်ကို ချမှတ် ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုးလုပ်ဆောင်လျှက် ရှိနေသည်ကို အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ပါသည် ။
သူတို့ဖော်ဆောင်နေသည့် မူဝါဒ (၁) ရပ်ပြီး တိုင်းပြီးတိုင်း ပြည်သူများ စီးပွားရေးကား ကြပ်သထက် ကြပ်လာသည် ။ ငတ်သထက်ငတ်လာသည် ။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားနေသည်ကို သူတို့မသိ၍ မဟုတ် ၊ သိသိကြီးနဲ့ တမင်ကြံစည်ကား တိုင်းပြည်ကို စနစ်တကျ ဖျက်စီးနေကြခြင်းဟု ပထမဦးစွာ ယုံကြည်ထားစေချင်ပါသည် ။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် တိုင်းသူပြည်သားများကို အသာထား သူတို့၏ အာဏာရှင်စနစ် ယန္တရားကြီးကို အဓိက မောင်းနှင်ပေးထားသည့် တပ်မတော်များနှင့် ၀န်ထမ်းများကိုပင် သူတို့၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လောက်ပင် မေတ္တာမရှိကြသည်ကို သူတို့၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင် ချက်များတွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိူင်လေသည် ။
တိုင်းပြည်တပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် ကြာရှည်စွာ အုပ်ချုပ်လိုလျှင် ထိုတိုင်းသူပြည်သူသားတို့၏ အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင် အားကောင်းစေမည့် ပညာရေးစနစ်ကို ဖျက်စီးရသည့် ဆိုသည့် မူဝါဒ ကိုသာ လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နေကြသည် ။ အခြေခံ ပညာရေး စနစ်မှ စကာ တက္ကသိုလ် ပညာရေး စနစ် အဆုံး နေရာတိုင်းတွင် သမိုင်းမှန်တို့ကို ဖျောက်နိူင်သမျှ ဖျောက်ထားလာကြသည် ။
အတွေးအခေါ် အားကောင်းစေမည့် စာပေများ အစား အစီအစဉ် တကျ မရှိသည့် စာပေများကို ယောင်ဝါးဝါး အတွေများ ဖြင့်ရွေးချယ်ကာထုတ်နူတ် သင်ကြားလာကြသည် ။ တတ်ကျွမ်း နားလည်သော ပညာရှင်များ၏ လမ်းညွှန်ပြသချက်ကို အသိညဏ်နည်းပါးသည့် လူမိုက်များက လက်မခံ ။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း မြန်မာနိူင်ငံ ပညာရေး စနစ်ကို စတင်ဖျက်စီး လာကြခြင်း၏ အကျိုးဆက်ကို ယနေ့ခတ်လူငယ်များ ခါးသီးဖွယ်ရာခံစား နေကြရသည်ကို မြန်မာနိူင်ငံ ပကတိ အနေအထားကို ကြည့်၍ မည်သူမျှ ငြင်းချက်ထုတ်၍ မရ ။
အခြေခံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ခိုင်မာမှု မရှိခြင်း ၊ သင်ကြားပြသပေးသည့် ဆရာဆရာများ၏ အားနည်းချက် ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ချို့တဲ့သော ကျောင်းသားများနှင် စဉ်ဆက် မပြတ် ပညာသင်ယူရေး စနစ်ဟု အမည်ခံကာ မအောင်မရှိ ပညာရေး စနစ်တို့ ပေါင်းစုံသောအခါ ကျောင်းသားများ၏ အတွေးအခေါ် ညဏ် အမြော်အမြင် များကို ထိရောက်အောင် မပံ့ပိုးပေး နိူင်ကြတော့... ဥယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ မ၀ရေစာ လစာပေးထားမှုတို့ကြောင့် ပန်းပျိုးလက်တို့သည် ပန်းပင်များကို ချစ်ခင်မြတ်နိူးတန်ဖိုးထားသော စိတ်ထားတို့ဖြင့် မပြုစုချင်ကြတော့ ။ သင်တင့်မျှတသော မြေသြဇာ ၊ ရေ နှင့် နေရောင် ခြည် ၊ မြေလောင်းပေါင်းသင် အစရှိသည့် လိုအပ်မှု တို့ မရကြသောအခါ ထိုပန်းပင်တို့မှ ပန်းပွင့်တို့သည် လှပစွာ မပွင့်ဖူးနိူင်ကြတော့ ။ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းသည်က အချို့သောပန်းပင်များကား ပွင့်ဖူးခွင့်ကို မရကြတော့ချေ ။ ထိုသို့ မလှမပ ပွင့်နေကြသော ပန်းပင်တို့ကို ဈေးကွက်တင်သော အခါ ပန်းဟူသည့် ပုံသဏ္ဍန်သာ ရှိပြီး ပန်းပွင့်တပွင့်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါဖြင့် မပြည့်စုံသောကြောင့် ဈေးကောင်းမရ ။ ထိုသို့ လှပစွာ မဖူးပွင့်နိူင်သော ပန်းပင်များနှင့် ပွင့်ဖူးခြင်းမရသည် ပန်းပင်တို့ စုဝေးရာ ဥယာဉ်ကြီးသည် လှပမှုတို့ ပျောက်ဆုံးကာ ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်နေ သကဲ့သို့ အနာဂတ်မျိုးဆက်လူငယ်များ၏ ညဏ်ရည်ညဏ်သွေး ထက်မြက်မှုတို့ကို ပိုမို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ပညာရေးစနစ်ကြီး ပျက်စီးလာသော အခါ ထိုသို့သော မျိုးဆက်သစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တိုင်းပြည်ကြီးသည်လည်း ပြိုကျပျက်စီးလာသလို လူငယ်များ၏ အနာဂတ်သည်လည်း ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ကာ ဦးတည်ချက်တို့ ပျောက်ဆုံးလာကြသည် ။
တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ် ၊ သိပ္ပံ အသီးသီးမှ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ တွင် သင်ယူ တတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ကာ ထိုပညာရပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပါသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုကာ ဘွဲ့တံဆိပ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သော်လည်း ထိုသို့သော ဘွဲ့ရလူငယ်များ၏ လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ၀င် ရောက် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေပါက သင့်တင့်မျှတသည့် အလုပ်များကို ဖန်တီးပေးနိူင်မှု မရှိပါ ။ ထိုအခါ ဘွဲ့ရလျှင် ဘာလုပ်မည် ၊ မိဘကို ဘယ်လို ထောက်ပံ့ပေးမည် ၊ မိမိတို့၏ အနာဂတ်ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမည်ဟု မျှော်လင့်ကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပညာသင်ယူခြင်း၏ အကျိုးအမြတ်ကို ခံစားရတော့မည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည့် လူငယ်များ၏ ရည်မှန်းချက်တို့ ဗုန်းဗုန်းလဲကြခဲ့ရသည် ။
လုပ်စရာ အလုပ်မရှိသည့်အခါ လူငယ်များ၏ ခြေလှမ်းတို့သည် ငွေရလွယ်သည့် မကောင်းသည့်လုပ်ငန်းများ ၊ လောင်းကစား လုပ်ငန်းများ ဘက် ကို ဦးတည်လာကြသည် ။ နိူင်ငံတနိူင်ငံတွင် ပညာရေး စနစ် ပြိုကျ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် လူငယ်များ၏ အနာဂတ် ဦးတည်ချက် ပျောက်ဆုံးလာသည်နှင့် တပြိုက်နက်ထဲ ထိုလူငယ်များ၏ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည် ။ ထိုသို့စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ပျက်စီးနေကြခြင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ အများဆုံးနေထိုင်ရာ နိူင်ငံမှ လူငယ်များဟု ကြိမ်ပြောလျှင်ပင် ယုံရခက်သည့် ညစ်နွမ်းသည့် လုပ်ရပ်များက သက်သေခံနေကြပါသည် ။
အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားထု ညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားအောင် နေရာ အနှံ့အပြားတွင် တက္ကသိုလ် ၊ ကောလိပ် ၊ သိပ္ပံ အစရှိသည့်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်လာကြသည် ။ သာမန်အားဖြင့် ကြည်လျှင် တိုးတက်လာသယောင် ထင်မှတ်မှားလောက်စေပါသည် ။ တကယ့်လက်တွေ့တွင်မူ တက္ကသိုလ် အဆင့်ကျောင်း တစ်ခု ဖွင့်လှစ် တည်ထောင်ထားသော်လည်း ဘယ်ကျောင်းမှ ဆရာဆရာမ မလုံလောက် ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းက မပြည့်စုံ ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းက စနစ်တကျ မရှိ နဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးကို တစတစ တိုးတက်ဖျက်စီးနေကြခြင်းသည် ဖြစ်သည် ။ ကျောင်းပြီး၍ ဘွဲ့ရလူငယ်များကို မေးကြည့်သည် ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံသည် ၊ သူတို့ဘာမှ မတတ် ၊ ထိုသို့ ဘာမှ မတတ်၍ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ယုံကြည်ချက်မရှိ ၊ ရည်မှန်းချက်တို့ ပျောက်ဆုံးကုန်ကြသည် ။ ကိုယ့်ဘ၀ ရည်မှန်းချက်တောင် ပျောက်ဆုံးနေသော လူငယ်များ၏ တိုင်းပြည် အပေါ်ထားသော ရည်မှန်းချက်ကား ဘယ်လိုလုပ် ခိုင်မာမှု ရှိမည်နည်း ။ ဤသည်ကို မိဘနှင့် ဆရာတို့က မသိမဟုတ် သိသိကြီးနဲ့ လက်ခံထားကြခြင်းက သားသမီးများကို ကိုယ်တိုင် ဖျက်စီး လိုက်သလို ဖြစ်နေသည် ။ အချိန်တန်၍ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ကြရမည့် အချိန် ထိုက်တန်သော အလုပ်မရလျှင် လူသဘာဝ ညည်းညူကြသည် ၊ ယနေ့ခတ် လူငယ်များသည် ညံ့ဖျင်းကြသည်ဟု ဝေဖန်ကြသည် ။ ထိုသို့ ဝေဖန်ခြင်းသည် တရားမျှတမှု မရှိ ။ ပင်ကိုယ်က ညံ့ဖျင်းခြင်း မဟုတ် ၊ ညစ်ထေးယုတ်မာသော စိတ်များဖြင့် လူငယ်များကို စနစ်တကျ ဖျက်စီးနေသော စနစ်ဆိုးကြောင့်သာ ဖြစ်သည် ။ ထိုစနစ်ဆိုးကို ဆက်လက် လက်ခံနေကြလျှင် နောင်လာမည့် မျိုးဆက်သည် ယခုထက် ပိုမိုညံ့ဖျင်းမည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည် ။
တမျိုးသားလုံး အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ပညာရေ မြင့်မားရေး ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားသည့် စစ်အာဏာရှင်များ သည် တကယ့်လက်တွေ့တွင် အဖော်အချွတ် အသားပေး အနုပညာရှင်များနှင့် လူငယ်များ၏ အသိညဏ်ကို အဆိပ်ခတ်သော ညစ်နွမ်းသော စာပေများကို အားပေးနေသလောက် စစ်မှန်သော ပြည်သူလူထု အကျိုးပြု အနုပညာရှင်များကို အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ဒုက္ခပေးလျှက် ရှိနေသည့်ကို လက်တလောတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အနုပညာရှင် ၁၂ ဦး ၏ အနုပညာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းက သက်သေပြလျှက် ရှိသည် ။ ပြည်သူလူထု ကို အကျိုးပြုတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို အာဏာရှင်တွေက အနုပညာလုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်လိုက်သလို ပြည်သူလူထုကလည်း အာဏာရှင် စနစ် တည်မြဲရေး အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင် အမည်ခံ လူတစ်စု ကို ပြန်လည် ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ အဲဒီလူတွေ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇတ်ကားတွေ ၊ သီချင်းတွေ ၊ စာတွေကို အားမပေးဘဲ နေလို့ရပါတယ် ။ အဲဒီလိုသာ ပြည်သူလူထုက ညီညာစွာ တုန့်ပြန်နိူင်ရင် ပြည်သူလူထု အကျိုးပြု အနုပညာရှင် တွေ ဘက်က ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြနိူင်သလို ၊ အာဏာရှင် လက်ကိုင်ဒုတ် လုပ်စားတဲ့လူတွေကို ပြည်သူလူထုက လက်မခံပါဘူး ဆိုတာ သက်သေပြနိူင်တဲ့ တခုတည်းသော အလွယ်ကူဆုံး လုပ်ဆောင် နိူင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ထင်မြင် ယူဆမိပါတယ်။
၁၉၂၀-ခုနှစ်ကာလတွင် အမျိုးသားပညာရေးလှုပ်ရှားမှု၏ ခေါင်းဆောင် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက ဂန္ထလောကမဂ္ဂဇင်းတွင် “ခေတ်ဆိုးလျှင် ခေတ်ကို အပြစ်မဆိုသာ။ ထိုခေတ်တွင်ရှိသော သူတို့ကိုသာ အပြစ်ဆိုစရာ ဖြစ်သောကြောင့် ငါတို့ခေတ်အတွက် ငါတို့တာဝန်ကြီးပေတကားဟု များများကြီး နှလုံးသွင်းအပ်ပေသည်” ဟုရေးသား တိုက်တွန်းခဲ့၏။ ယနေ့ချိန်ခါတွင်လည်း မြန်မာနိူင်ငံ၏ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေသည်ကို လက်ခံထားသည့် ကျနော်တို့ကိုသာ အပြစ်ဆိုစရာ ရှိသည် ။ အာဏာရှင်တို့က စနစ်တကျ ဖျက်စီးသည် ။ သူတို့ အပေါင်းအပါများက အားတက်သရော ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြသည် ။ ကျနော်တို့ နိူင်ငံသူ နိူင်ငံသားများကမူ တွန်းလှန်ရန် စိတ်ကူးမရှိကြ ၊ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှ လွတ်မြောက်အောင် ဦးဆောင် ကျိုးစားပေးနေသူများကို မကူညီချင်ကြ ၊ ကြားနေ၀ါဒဟု ကြွေးကြော်ကာ မျောလိုက် နေကြခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပေသည် ။ ထို့ကြောင့် အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြီးကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ညည်းညူနေကြမယ့် အစား ကိုယ်လုပ်နိူင်သလောက် လုပ်ပြီး တုန့်ပြန်တာ ပိုမို ထိရောက်မှာ အမှန်ပါဘဲ ဆိုတာ ယုံကြည်စေချင်ပါတယ် ။
တိုင်းပြည် တပြည် အာဏာရှင် စနစ်အောက်မှ ရုန်းထွက်၍ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံ တည်ဆောက်မည် ဆိုလျှင် နိူင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ အင်အား ကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်သလို နိူင်ငံရေး မဟုတ်သည့် ပြည်သူလူထု ကိုယ်စားပြု အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ လည်း အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ကျောင်းသားထုကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ၊ အလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည့် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ၊ လူငယ်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် လူငယ် သမဂ္ဂများ အစရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အင်အားကောင်းမွန်စေဖို့ အထူးလိုအပ်ပါသည်။
ထိုသို့သော အဖွဲ့အစည်းများ အမြဲအင်အားတောင့်တင်းနေမှသာ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိူင်မည် ဖြစ်သည် ။ ထိုသို့သော အဖွဲ့အစည်းများ အင်အားကောင်းမွန်လာသည် နှင့် တပြိုင်နက်ထဲ သူတို့ ထိုင်ခုံ စတင်ယိုင်နဲ့လာနိူင်သည်ကို သိသော စစ်အာဏာရှင်များသည် ပြည်သူလူထု ကိုယ်စားပြု နိူင်ငံရေးပါတီ ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂနှင့် နှင့် လူငယ်သမဂ္ဂ အစရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ တရားဝင် ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားလိုက်ကြသည် ။ တရားဝင် ရှိပြီးသာ နိူင်ငံရေး ပါတီများကို မတရား အသင်းကြေငြာ တတ်ကြသည် ကို ယနေ့တွင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိူင်ရ ပါတီ NLD ကို တရားမ၀င် နိူင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် တရားမ၀င်ကြောင်းကြေငြာလိုက်သလို သမဂ္ဂများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားလိုက်သည်က မျက်မြင် ထင်ရှားတွေ့မြင်ရပါသည် ။
သူတို့ လုပ်သမျှ ခေါင်းငုံ့ခံနေကြလျှင် နောင်လာမည့် အနာဂတ်တွင် ပြည်သူလူထု စီးပွားရေး ယခုထက် ပိုမိုကြပ်တည်းလာမည် ၊ ပညာမသင်နိူင်သော လူအရေ အတွက် နှင့် ဘွဲ့ရပညာမတတ်များ ပိုမို များပြားလာမည် ၊ တိုင်းပြည် ဆင်းရဲသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုတို့ကြောင့် ရာဇ၀တ်မှု များ ပိုမို ဖြစ်ပွားလာမည် ။ မိဘတို့ စီးပွားရေး ကြပ်တည်းမှုသည် သားသမီးတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တကို ဖျက်စီးထားသလို ဖြစ်သည့် အတွက် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် သမီးပျိုများသည် ခန္တာကိုယ် ကို အရင်းပြုကာ စီးပွားရှာသည့် အလုပ်များ ပိုမို များပြားလာပေမည် ၊ ထို့သို့ အဘက်ဘက်က ချို့ယွင်းချက်တို့ ရှိနေသည့် အခါကာလတွင် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်တို့ ပျောက်ဆုံးကာ လူမျိုးပါ ပျောက်ကွယ်သွားစေနိူင်သည် ။
ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ ပြည်သူလူထု အပေါင်းတို့ ၊ ကိုယ်ရှာမှ ကိုယ်စားရတယ် ဆိုတဲ့ စကားက မှန်တယ်လို့ ယူဆနေကြတာ မှားတယ်လို့ ယူဆလို့ မရပေမယ့် အတိအကျ မှန်ပါတယ်လို့လည်း ပြောလို့လည်း မရပါဘူး ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပညာသင်ယူထားကာ နိူင်ငံတော်က အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ လူတစ်ယောက်က လမ်းဘေး ဈေးသည် ၊ ဆိုက်ကားသမားလောက်တောင် ၀င်ငွေ မရရှိတာဟာ ကိုယ်လုပ် သလောက်ကိုယ့် အခွင့်အရေး ခံစားရလို့လား ၊ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေး ရနေကြလို့လား ၊ ကိုယ်သင်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု ပြုနိူင် ကြလို့လား ။ သမ္မာ အာဇီဝ ကျကျ အလုပ်လုပ်နိူင်ကြတဲ့ အစိုးရ ၀န်ထမ်း ရှိသေးလို့လား ။ အချို့က လိမ်တယ် ၊ အချို့က ခိုးတယ် ၊ အချို့က တောင်းစားတယ် ၊ အချို့က ဒါးမြ တိုက်တယ် ၊ ဘယ်မှာလည်း ဖြူစင်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု ။ သူခိုးတွေ စုနေတဲ့ နေရာမှ ခိုးတဲ့ အလုပ်က မထူးဆန်းပေမယ့် ဖြူစင်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု ပြုနေတဲ့ လူတွေဘက်က ကြည့်လိုက်ရင် အင်မတန် ရွံမုန်းစရာ ကောင်းတဲ့ အကုသိုလ် အလုပ်ကို ပျော်ပျော်ကြီး လုပ်ကိုင် နေသလို ခံစားရတယ် ။ ထမင်း နပ်မှန်ဖို့ အတွက် အကုသိုလ် အလုပ်တွေ နေ့စဉ်လုပ်ကိုင် ရှာဖွေ စားသောက်နေရတဲ့ ဘ၀တွေမှာ ပျော်ဝင်ပြီး ကိုယ်ရှာမှ ကိုယ်စားရတာ ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ စကားက မှန်နေသေးရဲ့လား အဖြောင့် အတိုင်းဘဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ ။
အေးချမ်းသာယာကာ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိူင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာ အပြည့်အ၀ ရှိသလို ။ ကိုယ်ရှာ နိူင်သလောက် ကိုယ် ခံစားခွင့် ရှိပါတယ် ၊ နိူင်ငံသားတိုင်း အိမ်ယာ ပိုင်ဆိုင်နိူင်ရမယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဝင်ငွေ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အိမ်အဆင့် အတန်းတော့ ကွာသွားမှာပါ ။ နိူင်ငံသားတိုင်း ဖုန်းကိုင် နိူင်ကြတယ် ၊ ကိုယ်ရှာ နိူင်သလောက် ပေါ်မူတည် ပြီး ဖုန်း အမျိုးအစားတော့ ကွာမှာပေါ့ ။ ကိုယ်ရှာ နိူင်သလောက် ရှာပိုင်ခွင့် ရှိသလို ၊ ကိုယ်ကြိုးစားရင် ကြိုးစားတဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း ရရှိနေကြပါတယ် ။ နိူင်ငံတကာက စစ်သားတွေဟာ မြန်မာနိူင်ငံက စစ်သားတွေလို ပြည်သူကို သတ်မှ ထမင်းဝ တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တာရား ကို ကျားကန်ပေးထားတဲ့ အခြေခံ တပ်မတော်သားတွေ ၊ ပြည့်သူဝန်ထမ်းတွေ လည်း ပြည်သူလူထုနဲ့ အတူတူ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြပါလျှက် နှင့် ဒီစနစ်ကြီးကို ထောက်ခံပေးပြီး ကိုယ့်ဘ၀ ကို နစ်မွန်းသထက် နစ်မွန်းအောင် လုပ်နေကြမယ့် အစား ရုန်းထွက်စေချင်ပါတယ် ။
" နိူင်လိုသူ ကို အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ ဆေး " ဟူသည့် မြန်မာ စကားပုံ တခု ရှိပါသည် ။ ထိုစကားသည် ခန္တီပါရမီကို အဆုံးစွန်ထိကျင့်ကြံပွားများကာ တဖက်သား ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ၍ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်သူ များ အတွက် တကယ်ကောင်းပါသည် ။ သို့သော် ကိုယ်တိုင်က အရှုံးပေးလို စိတ်မရှိပါဘဲနှင့် မတတ်သာ၍ အရှုံးပေးလိုက် ရသူများ အတွက် နှလုံးမအေးတဲ့ အပြင် ပိုမို ဆိုးဝါးလာသည်ကို တွေ့ရှိနိူင်သည် ။ ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း အနိူင်ယူလိုသူကို မကျေနပ်ဘဲ အရှုံးပေး နေရသည့် အခါ အစ ပထမတွင် သိပ်မသိသာသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တဖြည်းဖြည်းနှင့် နာကြည်းမုန်းတီးလာသည် ၊ ရွှံရှာလာသည် ၊ တုန့်ပြန် ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာ သည် ။ ထို့သို့ လုပ်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်ဖွားနေသော်လည်း စိတ်ထဲတွင် အကြောက်တရားက လွှမ်းမိုးနေသည့် အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး ဒေါသထွက်လာ သည် ၊ ကိုယ့်နှင့် စိတ် တထပ်တည်း မကျတော့ ၊ ထိုအခါ စိတ်မကြည် ၊ စိတ်မကြည်လင်သည့် အတွက် ညဏ် မရွှင်တော့ ၊ ညဏ်မရွှင်သော အခါ အတွေးအခေါ်တို့ ညစ်ညမ်းလာသည် ၊ လူ့သဘာဝ အရ စိတ်ညစ်လျှင် တရားထိုင်သူထက် ၊ မဟုတ်တာ လုပ်ကာ စိတ်ထွက်ပေါက် ရှာသူ က များသည် ။ အတွေးအခေါ်တို့ ညစ်ညမ်းလာသည့် အခါ ကမ္ဘာစောင့် တရားဟု လူသိများသည့် အရှက် အကြောက် တရားတို့ကို အမြင်လွဲမှားလာကြသည် ။ မကောင်းတာ လုပ်ရမည်ကို မရှက်ကြဘဲ ကောင်းတာလုပ်တာကို ရှက်လာတတ်ကြသည် ။ အကုသိုလ် အလုပ် လုပ်ရမည်ကို မကြောက်ကြဘဲ ကုသိုလ် အလုပ် လုပ်ရမည်ကို ကြောက်လာကြသည် ။
အတွေးအခေါ် ညစ်ညမ်းလာသည့်အခါ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် မယုံကြည်ကြတဲ့ လူတွေဟာ အခါ သူတပါးကို ယုံကြည်ဖို့ ဆိုတာ ပိုမိုခက်ခဲလာတယ်။ လူတိုင်းကို သံသယနဲ့လိုက်ပြီး ကြည့်လာတတ်ကြတယ် ၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီး လူတကာကို တိုင်းတာလာကြတယ် ။ အဲဒီလို အဘက်ဘက်က အားနည်းချက်တွေ ကြောင့် မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ အရေး လုပ်ရှားနေသူတွေကို လုပ်စားနေပါတယ်ဆိုပြီး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်သိမ်းပြီး ရမ်းသမ်းပြောလာကြတယ် ။ ဒီလို အကျိုးဆက်တွေကြောင့် လုပ်ရှားနေသူတွေကို ကူညီပံ့ပိုးချင်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပါေ၀၀ါးကုန်တယ် ။ ငါတို့ကူညီလည်း အလကားပါဘဲ ၊ တကယ်လုပ်ရှားတဲ့ လူတွေ လက်ထဲမရောက်ဘဲ လုပ်စားတဲ့လူတွေလက်ထဲ ရောက်သွားနိူင်တဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်ကိုင်ထားလာကြတယ် ။ နောက်ဆုံးရလဒ်က ပြည်သူလူထု ကောင်းစားရေး ဦးတည်ချက်ကို ဘ၀တွေ ပေးဆပ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လူတွေက လုပ်ရှားဖို့ ခွန်အားတွေ နည်းပါးကုန်တယ် ။ တိုင်းပြည် အတွက် တကယ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေမှာ သူတို့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာဖို့ အချိန်မရှိကြပါဘူး ။ ပြည်သူလူထုအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကို ပြည်သူလူထုက ပြန်လည်ကူညီပေးမှ မြန်မာ့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ဆွဲကိုင် နိူင်မှာပါ ။
တိုင်းပြည်တပြည်ကို ဖျက်စီးဖို့က အလွယ်လေးပါ ၊ ပြန်လည် ထူထောင်ဖို့ အတွက် အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ် ။ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ဆွဲကိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် အာဇာနည် သူရဲကောင်းတို့ အသွေးအသာတွေကို တော်လှန်ရေး ယဇ်ပလ္လင်မှာ ရဲရဲကြီး ပူဇော်ခဲ့ကြလို့ လွတ်လပ်တဲ့ နိူင်ငံ အဖြစ်ရပ်တည်နေနိူင်တာပါ ။
ယနေ့အခါမှာ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ တရုတ်လက်အောက်ကို ကျရောက်နေပါပြီ ။ ဒါတင်ဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး အချုပ်အချာ အာဏာကိုပါ စတင်ထိပါးလာပါပြီ ဆိုတာ ယနေ့မျက်မှောက် မြန်မာနိူင်ငံရေးမှာ တရုတ်က ၀င်ရောက် စွက်ဖက်နေတာကို တွေ့မြင်နေရပါပြီ ။
နိူင်လိုလျှင် အရှုံးပေး နှလုံးအေးတဲ့ဆေး" ကြီးကို ကိုယ်ရင်ထဲက သည်းခံခြင်း တရား မပြည့်စုံဘဲ သောက်သုံးနေကြတဲ့ အခါ ကြုံတွေရတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ၊ ဆိုးကျိုးတွေကို ဆက်လက် မခံစားချင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ အနိူင်ယူနေသူတွေကို အရှုံးမပေးကြပါနဲ့ ။ မိမိတို့ တတ်နိူင်တဲ့ဘက်က တုန့်ပြန် တွန်းလှန်ကြပါ ၊ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် မဆောင်ရွက်နိူင်တဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေက ငွေအားနဲ့ ကူညီပေးကြပါ ၊ တကယ်လုပ်ရှား နေသူများကို ၀န်း ရံပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ လိုက်ပါသည် ။ မိမိတို့ကျရာ အခန်းဂဏ္ဍကနေ ကိုယ်တတ်နိူင်တဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပေးကြကာ မကြာမှီအချိန်အတွင်းမှာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတကာ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိူင်ငံတော်ကြီးဆီသို့ ညီညာစွာ စတင် ချီတက်ကြပါစို့..................။